M/weynaha Puntland oo ka hadlay arrimaha doorashooyinkii JubbaLand, kuna dhaawaqay.
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa wareysi uu siiyey Idaacadda BBC-da, wuxuu si toos ah uga hadlay markii ugu horeysay arrimaha ku aadan doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo & doorka maamulkiisu uu ku lahaa.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ay doorasho xor ah ka dhacday magaalada Kismaayo, taas oo uu sheegay in uu sharciyadda leeyahay Axmed Madoobe, isla markaasna waxyaabaha kale ee dhacay ay ahaayeen is faham darro siyaasadeed.
Deni wuxuu sheegay in ay rajeynayaan in wada hadal iyo tanaasul siyaasadeed la gaaro oo laga baxo marxaladaha hadda taagan, dhamaan dhinacyada oo dhan ay tahay in ay wadajir ugu turaan mustaqbalka Jubbaland.
Madaxweynaha ayaa cadeeyey in ay Puntland aqoonsan tahay Axmed Madoobe, sababtuna ay tahay in uu maray wadada sharciga ee geedi socodka doorashooyinka, taas oo ahayd arrimaha muhiimka ah ee ay ahayd in la qaado oo ay Puntland doonaysay.
Beesha Caalamka ayuu sheegay in ay aqoonsanaayeen guddigii Baarlamaanka soo xulay, taasna ay kalifayso in wax kasta oo ay guddigaas keenan ay sharci yihiin, tabashaduna ay tahay dhaqan Soomaaliyeed oo aan waxba buuran ka jirin,